Tilmaamaha iyo xeeladaha Craps ee ugu fiican - Gambling Papa
1 Waa maxay Craps?
2 Sidee loo ciyaaraa Craps?
3 Maxay yihiin jaantusyada istiraatiijiyadda Craps?
4 Hagaha Craps ee bilowga ah
5 Xeeladaha khamaarka Craps
6 Sidee loogu guuleystaa Craps?
7 Craps talooyin iyo tabaha
Laga soo bilaabo meelo fog iyo ballaaran, dadku waxay ku qaylinayaan miiska craps-ka ee casinos adduunka oo idil. Haddii aadan waligaa helin fursad aad ku rogto laadhuu, markaa ma dhihi kartid waad wada aragtay. Ugu yaraan, fekerkeenna, Craps wuxuu ka mid yahay cayaaraha ugu raaxada badan ee casino. Markaad tixgeliso sida firfircoon ee dadku u yimaadaan inta lagu jiro qulqulka kulul, waa wax sasabasho ah in laga fekero inaad dhigto sharad.
Ciyaarta laadhuuga ee caanka ah ee loo yaqaan ‘casino’:
Ciyaarteeda udub dhexaadka u ah, kulankaan wuxuu ku wareegayaa inuu miiska u tuuro labo laadhuu. Dabcan, markaad hoos ugu dhaadhacdo, waxaa kudarsamaya lakabyo kakanaanta kakanaanta oo ka dhigaysa mid xiiso u leh ka qaybgalayaasha. Si kastaba ha noqotee, taasi ma saareyso aasaaska guud ee fudud ee ciyaarta. Anaga ahaan, waxay ka dhigeysaa wax sii jeclaysiin badan.
Samee wagers natiijada laadhuuga:
Ilaa inta khamaarka uu khuseeyo, waxaad dulsaaridoontaa guntimahaaga waxa aad fileyso in laadhuhu ay ku soo degaan markay dhammeeyaan rogista. Haddii aad sameysid fikrad sax ah, waxaa laguu abaalmarin doonaa si qoto dheer iyadoo loo eegayo lacagta bixinteeda.
Sidoo kale caan ka ah banaanka casino mahadnaqa waxyaabo yar oo looga baahan yahay qalabka:
Iskusoo wada duuboo intaas oo dhan, waxaad u badan tahay inaad la kulanto ciyaaro yar oo noloshaada ah, xitaa banaanka casino. Maaddaama ay u baahan tahay wax aad u yar in la bilaabo ciyaar, waa wax caan ku ah gudaha guriga.
Waa maxay Craps?
Waxaan ku soo koobnay gabay mowduucan muddo ku filan. Aan u dhaadhacno runta arrinta. Kasiinooyinka waddanka oo dhan, ciyaar caan ah oo loo yaqaan ‘craps’ ayaa lagu ciyaaraa. Ciyaartani waxay leedahay taariikh dheer oo taariikhi ah oo fidsan oo ku soo laabanaysa ilaa wakhtigii Saliibiyiinta.
Fududeynta ciyaar duug ah oo reer Yurub ah oo loo yaqaan Hazard:
Kahor intaysan u soo bixin magaceeda casriga ah, nooc ka da ‘weyn oo loo yaqaan’ craps ‘ayaa laga ciyaaray Yurub oo dhan. Ilaa inta diiwaanku socdo, waxay umuuqataa in ciyaarta ay soo ifbaxeyso mararka qaar inta lagu gudajiray dagaalladii barakeysanaa ee xilliyadii dhexe. Mar alla markii Saliibiyiintu ku noqdeen guryahoodii, waxay la yimaadeen ciyaarta iyaga oo wata.
Waxaa lagu alifay Maraykanka bilowgii 1800: meeyadii
Halkaas, ciyaartu waxay ku kala boodaysay dadka qaaradda dhexdeeda ilaa ay bilaabeen inay u haajiraan Mareykanka. Halkaa marka ay marayso, waxay bilowday ruugitaankeedii ugu dambeeyay. Markii boodhku degay, waxaa loo yaqaanay “craps”. Ugu dambeyntiina, waxay qaadatay qaab aan maanta aqoonsan nahay.
Wuu ka socdaa adduunka oo dhan ilaa maanta:
Boqolaal sano, dadku way sii wadeen inay kaqaybqaataan hawshan xiisaha badan. Wadada dhexdeeda, dadku waxay leeyihiin hal nasiibna way lumeen si ay cimrigooda u sii noolaadaan. In kasta oo ay isbeddel ku imaan karto, waa soo jiidasho magnet oo u muuqata mid hubaal ah inay sii jiri doonto muddo dheer.
Sidee loo ciyaaraa Craps?
Si aad u bilawdo, waa inaad barataa xadhkaha kahor intaadan miiska u dhowaan. Haddii kale, waxay la mid noqon doontaa sidii kalluun hadda dhashay oo dhex dabbaalanaya gorgorrada dhexdooda. Ilaa aad ka heshid mooyee in dharkaaga gaaban la cuno, waxaan kugula talin lahayn in aad waqti qaadato si aad uga dulqaadatid aasaaska.
Marka hore, aan ka hadalno qaab dhismeedka ciyaarta. Tan iyo markii aad dhigeyso sharad ku saleysan doorka dhimashada, waxaa jira natiijooyin badan oo suurtagal ah oo ka badan inta badan ciyaaraha kale ee casino. Sidaa darteed, waxay u egtahay inay xoogaa adag tahay in lagu barto farsamadan iyada oo loo marayo xusuusta rote. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xeelado wax ku ool ah oo aad ku shaqaalayn karto markaad fadhiisato.
Qaab dhismeed isku mid ah wareeg kasta:
Caadi ahaan, waxaan u adeegsannaa qaabdhismeedka ciyaarta si aan ugu jiheysno waxyaabaha aan ku qanacsan nahay. In kasta oo saamayntu ay yar tahay, haddana waxay u muuqataa inay yeelaneyso saameynta wax aad uga ballaaran. Waxay u egtahay in xitaa haddii leexasho yar oo tirakoobka ay abuureyso saameyn isugeyn ballaaran.
Tilmaamaha tallaabo-tallaabo ee loogu ciyaaro Craps
Bilowga wareegga, dhig jajabyadaada khadka qadarka: Kaddib markii toogte uu soo qaado laadhuu, qof walba wuxuu helayaa fursad uu miis yar ku dhigo miiska. Haddii aad go’aansato inaad sharad gasho waqtigan, waxaad ku sharxi kartaa iyaga inay ku guuleystaan ​​liiska ugu horreeya ama guuldaraystaan.
Kadibna, toogtaha ayaa soo rogaya laadhuu si uu u bilaabo wareega soo baxa:
Waxay kuxirantahay sida loo dhigay sharadka, waxaad u rujin doontaa toogteha inuu ku dego lambar gaar ah. Mar alla markii uu sii daayo laadhuuga, waxaa lagaa mamnuucayaa inaad dhigto wax jajabyo ah.
Haddii aad sharad ku dhigto baaska, waad guuleysan doontaa ilaa inta laadhuhu muujinayaan midkood 7 ama 11: Tan iyo markii laadhuhu uu ka tagay gacantiisa, dhagaystayaasha ayaa hareeraha taagnaa iyagoo yaaban. Iyada oo dad badani aamusnaayeen, laadhuhu miiska ayaa lagu dul garaacay muuqaalka Qaadirka ah. Hadaad todobo sharad dhigto, markaa waad ka tagi laheyd meeshan adigoo ka mid ah kuwa caawa nasiibka u yeeshay guuleysiga.
Dadka ku khamaara baaska way lumin doonaan haddii ay muujiso 2, 3, ama 12:
Haddii aad sharad ku gelisay khadka ha dhaafin, markaa waxaad rajeyneysaa natiijo gebi ahaanba ka duwan marka laadhuxu dhulka ku dhufto. Kaba soo qaad inaad si sax ah u yeedhay rasaasta, waxaa laguugu abaalmarin doonaa si heer sare ah saadaalintaada.
Haddii uu toogto nambarka nambarka, ka dib wuxuu sii wadaa inuu rogo laadhuu: Ilaa iyo inta laadhuhu ay ku dul dhacayaan lambarka barta, ka dibna toogteha ayaa helaya inuu sii ciyaaro. Meel kasta, waxaad fursad ugu heli doontaa inaad dhigto sharad dheeri ah.
Halkaas, wuxuu ka sii wadaa rogista illaa uu dhibicdiisa ku dhufto ama uu ku dego 7: Nidaamkani wuxuu soconayaa illaa uu ka deggo toddobo. Kaliya hal waddo oo kale ayaa jirta si loo joojiyo ciyaar socota. Haduu laadhuhu ku dul dego nambarkiisa dhibic, markaa ciyaarta sidoo kale waa istaagi lahayd.
Maxay yihiin jaantusyada istiraatiijiyadda Craps?
Illaa iyo hadda, waxaan daboolnay aasaaska aasaasiga ah ee ciyaarta oo lagu daray wax yar oo taariikhdeeda ah. Hadda, waxaan ku geli karnaa qaar ka mid ah mowduucyada cunnada leh ee khamaarayaasha qibrada leh ee halkaas jooga. Ka soo qaad inaad ciyaartay dhowr wareeg oo ah craps. Si kastaba ha noqotee, waxa aad runtii jeclaan laheyd waa wax kaa caawinaya hagaajinta istiraatiijiyaddaada. Sidaa awgeed, waxaan haysannaa hal talo oo maskaxda lagu hayo. Haddii aadan horay uga maqlin iyaga, markaa jaantusyada istiraatiijiga ah ee istiraatiijiyadu waxay noqon karaan beddel beddelaad run ah oo ku jira gacanta midig.
Wuxuu ku tusinayaa fursadaha khamaar gaar ah:
Asal ahaan, jaantusyadan ayaa ku tusaya aruurinta waxa ugu badan ee dhici doona ka dib markii toogtaha u ogolaado laadhuu. Dabcan, dhamaadka maalinta, waa wax kasta oo macquul ah dhamaadka. Iyada oo jaantusyadan gacanta lagu hayo, waxaad ku hubaysan doontaa tirakoobyada lagama maarmaanka u ah inaad si dhab ah u ciyaartid khilaafka.
Khadadka la maro:
Kaba soo qaad inaad dareensan tahay calooshaada in ridahaaga uu yahay nin nasiib badan. Hadday taasi dhacdo, markaa waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad sharad gasho xariiqa hore. Ilaa iyo inta calooshaadu heshay dareen weyn, markaa waxaad ka kasban doontaa tan inaad raacdo hoggaankaas.
Dhinaca kale, haddii mindhicirkaagu kuu sheegi lahaa inaad sharad ku dhigto ridaha wax tooganaya, markaa waxaad fiidmeerta ka dhigi lahayd dhabarka dambe ee ha dhaafin khadka. Qaabkaas, mar haddii ridiyuhu seegay calaamadihiisa, waad ka faa’iidi lahayd dhicitaankiisa. Si kale haddii loo dhigo, waxaad la socon doontaa wax ka badan intaad la timid iyadoon loo eegin natiijada.
Kadib duudduubkii ugu horreeyay ee laadhuu, noocyada kala duwan ee sharadyada suurtagalka ah waxay bilaabmaysaa inay xoogaa furto. Ka soo qaad inaad jeclaan lahayd inaad dhigto khamaar nambarka qaaska ah. Marka ay sidaas tahay, markaa waxaad ku dhejin doontaa jajabkaaga barta u dhiganta ee garoonka ciyaarta.
Kuwani waxay u muuqdaan inay leeyihiin caqabado adag oo aad ku garaaci karto. Sidaa darteed, haddii aad dhacdo inaad ku guuleysato sharad guuleysata midkood, waxaad kasban doontaa xitaa inbadan oo ka mid ah lacagtii khadka lagu geliyay.
Tallaabo kale oo dhib badan ka sarraysa, khamaaristani waxay u muuqdaan inay bixiyaan xitaa lacag aad u tiro badan markii si guul leh loo dhigo. Kuwa xiiseynaya waxoogaa khatar ah, kuwani waxay ina tusayaan sida wanaagsan ee ay u bixin karto marka aad fursad hesho.
Hal sharad oo duudduuban:
Shaki la’aan, kuwani waxay kamid yihiin doorarka ugu yar ee suuragalka ah ee aad ku arki doonto berrinka. Hase yeeshe, haddii aad habeen nasiib leedahay, waxaa laga yaabaa inay habboon tahay inaad dhowr jeer dul dhigto midkood. Fursadda ka baxsan ee aad ku guuleysato, waad la yaabi doontaa sida aad uga faa’iideysato maalgashigaas yar. Runtii, waligeed ma joogsanayso inay naga yaabiso.
Hagaha Craps ee bilowga ah
Ku ciyaarida craps waa mid toos u fudud. Sababtaas awgeed, waxay ka mid tahay ciyaaraha inta badan lagu taliyo ee bilowga ah. Dadka aan horay u aadin casino waxay u muuqdaan inay ka soo baxaan albaabbada oo ay ka buuxaan dareen cabsi leh.
Haddii aan si dhow u eegnay, waxay umuuqataa wax iska cad sababta ay dareenkaasi u muuqdaan. Markaad hoos u eegeyso caqabadaha kali kali, wax badan oo quruxsan ayaa u muuqan doona xitaa ka cabsi badan sidii ay horeyba u ahayd.
Sidaa darteed, ku dhajinta aasaasiga ma aha istiraatiijiyad xun markii ugu horreysa ee aad bilowdo. Habkaas, waligaa uma liqi doontid kalsooni darro mar aad ku jirto dabaqa casino.
Diirada saar khamaarista iyada oo ay ugu badnaan tahay bixinta:
Maaddaama qof kastaa lahaa waqti markii ay bilow ahaayeen, waa caddaalad darro in loo maleeyo in qof garanayo jawaabta saxda ah illaa ay soo bandhigaan xoogaa xoogaa ah. Arrintaas, waxaan soo jeedinaynaa kuwa bilowga ah inay ku dheggan yihiin wagers-ka ay u badan tahay. Saameyn ahaan, waxaad sare u qaadi doontaa tirada guuleysiga riwaayadaha aad ku soo marto. Si ka duwan haddii loo dhigo, waxay niyad jab badan ku noqon doontaa dadka neceb inay lumiyaan.
Iskuday inaadan dhigin khamaaris aan macquul aheyn ilaa aad ciyaarta ka garaneyso:
Ciyaaraha badankood, waxa ugufiican inaad iska ilaaliso inaad madaxaaga gasho ilaa aad ka aragto wareegyo kooban. Tan iyo markii aad ku ciyaartay craps adigoo isticmaalaya lacagta dhabta ah, ma aha mid la mid ah luminta ciyaar-ciyaar. Mar alla markii lacagta aad miiska saarto ay baaba’do, macquul maaha inaad dib u soo noqotid adigoon naftaada khatar dheeraad ah gelin. Dabcan, dib u soo celin ballaaran ma aha wax la maqli karo. Si kastaba ha noqotee, ma soo jeedin karno inay ku xirnaato mid booqashadaada ugu horreysa.
Sug in aad meel dhigto khamaarista illaa kuwa wax tooganaya ay duuduub ku soo baxaan:
Xusuusnow, waxaad had iyo jeer go’aansan kartaa inaad dhigto sharad ka dib wareegyada ugu horreeya. Maaddaama ay ciyaartu tahay waaya-aragnimo firfircoon, waxay kugu kicin kartaa inaad yeelato dulqaad yar. Halkii aad marin lahayd wejiga koowaad, iskuday inaad sugto illaa laadhuhu wax yar kululaado kahor intaadan galin tartanka.
Xeeladaha khamaarka Craps
Mar alla markii aad go’aansato inaadan sii sugi karin, waxaad ku quusin doontaa madaxa hore. Ka dib markii lagu siiyay fursad sidan oo kale ah, way adag tahay inaad diido markii ay wajiga kaa fiirinayso. Sababtaas awgeed, waxaan helnay talooyin dhowr ah oo kaa caawinaya hagitaan aad ku sii dheereyn doonto inta lagu jiro khibradaada ugu horreysa. Haddii kale, way ku fududaan doontaa caqabad fudud oo hortaagan safarkaaga.
Hoyga ka hortagga khasaaraha ka dhalan kara:
Marka ugu horreysa, barashada farshaxanka xayndaabku waa mabda ‘aasaasi u ah khamaariistaha hibada leh. Intii aad wax walba xariiqa gelin lahayd, isku day inaad qaar ka mid ah hantidaada ilaaliso. Haddii arrimuhu bilaabaan inay kaa hor yimaadaan, waad iska bixi kartaa adiga oo aan dheecaan ka bixin koontadaada bangiga. Ka dib, mar haddii miiska uu gadaal u soo laabto, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad dib ugu soo laabato si aad dib ugu soo ceshato sharaftaadii. Waxaa intaa dheer, waad soo celin kartaa wax kasta oo lumay ka hor intaadan tegin markii ugu horreysay.
Si gardarro ah u raadinta macaashka qiima kasta ha lahaadee:
Dhinaca kale, qof kastaa kuma raaxeysto inuu si ammaan ah ugu ciyaaro markasta. Haddii aad isku tirsato dadkaas, markaa yaa kugu eedeyn kara inaad si xamaasad leh u ciyaartay? Ka dib markaad timaaddo casino, hal istiraatiijiyad ayaa noqon doonta in sida ugu dhakhsaha badan loo weynaado. Ilaa intaad ku guuleysanaysid inaad wicitaan sax ah samayso, waxaad fuuli doontaa meel sare bilowga habeenka. Maaddaama tii ugu horreysay ee aad miiska saartey ay aad u weyneyd, cabbirka jackpot ee aad hesho markii aad guuleysato si siman ayey u noqon doontaa la qiyaasi karo Dabcan, haddii ay dhacdo inaad lumiso ciyaartaas ugu horreysa, waxaad heli doontaa wax intaa ka badan oo aad dib u soo ceshan karto markii aad ku dhex socoto laxanka. Ilaa intaad u dulqaadasho ku filan lumiso mooyee, waxaa fiicnaan lahayd inaad ku ekaato istiraatiijiyad dagaal yar inta jeebbadaadu ka qoto dheer yihiin.
Sidee loogu guuleystaa Craps?
Inta badan, waxaa lagaa tagi doonaa damacyada miiska markaad dhigatid sharadadaada. Marka, macno ayey samayn laheyd in si caqli gal ah loo dhigo. Maaddaama xakamayntaadu ay dhammaanayso markii jajabku jiifo, waxaan kugula talineynaa inaad qaadato inta ugu badan ee lagama maarmaanka ah ka hor intaadan dhigin. Habkaas, waxaad u isticmaali kartaa ilbiriqsi kasta inaad si taxaddar leh u qorsheeysid fursadaha mustaqbalka. Waxay kuxirantahay saadaasha ku jirta madaxaaga, wadada saxda ah ee ficilku wey ku kala duwanaan kartaa. Adoo xaddidaya ficilkaaga illaa aad dareento inaad hubto, waxaad hubin doontaa in ciyaar kasta ay ka buuxdo ujeedo. Riwaayado ujeeddo leh ayaa ah qodobka ugu weyn ee ka soocaya hiwaayadda xirfadleyda. Adigoo waxbadan sameeya, waxaad gali kartaa horyaalkan kore Intaadan xitaa ogaanin.
Marka hore, waxaad ubaahantahay inaad barato sidaad wax u sugi laheyd marka waqtigu uusan aheyn. Isaga oo leh waxaad fahantay wax sidan oo kale ah ayaa aad uga fudud sifaynta mabda’aas. Xitaa haddii aad maareyso inaad fahamto fikradda, arrimuhu aad bay u kala duwan yihiin markii aad ka mid tahay indhaha iyo dhawaaqyada dabaqa casino. Ilaa aad ka ogaanaysid goorta la dhigayo khamaarista si wax ku ool ah, had iyo jeer u oggolow daqiiqado yar oo milicsasho ah ka hor inta aysan jajabku ka bixin gacantaada. Maaha wax aan hore loo arag oo xirfadlayaal ahi inay gaadhaan go’aan labaad oo labaad oo ka soo hor jeeda miraha.
Raacida dadkii badnaa:
Mararka qaar, waxaad dareemi doontaa tamarta dadka oo isbedbeddelaya markii mawjadaha la beddelo inta lagu jiro liiska. Haddii aad ku dhacdo tan iyo markii isbeddelka noocaas ah, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa in waqtigu dhow yahay. Markii aad dareentay waxaas oo kale, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad raacdo dareenkaas illaa dhamaadka qadhaadhka. Caadi ahaan, waxay kuu horseedi doontaa inaad miiska u dhigto sharad la yaab leh oo miiska saaran sida ugu habboon.
Ku fadhiisiga kursiga wadayaasha:
Ugu dambeyntiina, adoo la wareegaya lafta lafta laftaada, waxaad heli doontaa xitaa dareen fiican oo ah sida ay wax u socdaan. Kadib markaad barato sida wax loo maleenayo in laqabto, dhib malahan inaad adigu halkaas aado. Isla marka aad dareento kalsooni, waxaan kaa codsaneynaa inaad isku daydo laaluushka ugu yaraan hal jeer. Kahor intaadan ka bixin khamaarka, qof walba waa inuu fursad u helaa inuu ku tuuro labo laadhuu miiska craps-ka. Ilaa aad ka dareentay dareenkaas, raaxaysigu xitaa waa inuusan ka mid noqon ereyadaada. Si kale haddii loo dhigo, waxay u egtahay inay ahaato adduunyo kale dadka intiisa badan ee soo maray.
Craps talooyin iyo tabaha
Kahor intaanan ambabixin, waxaan helnay talooyin dhowr ah oo dheeri ah oo kaa caawin kara inaad waxyaabaha rogto xitaa xaaladaha ugu badan ee Satirical. Sababtoo ah fursadaha badan, go’aaminta sida fiidkii u socon doono waa jimicsi jahwareer leh. Shaki la’aan, waxaa la fashiliyey in ka badan hal fikradihii tacabirka ee habeenkii. Si kastaba ha noqotee, uma muuqato inay ka rogeyso dad badan inay ugu yaraan isku dayaan. Ilaa iyo inta aad diyaar u tahay riwaayad ka buuxsantay farxad, xarig ku xirid miiska qashinka waa wax qof walba waa inuu la kulmaa. Ka sokow, talooyinka soo socda, waxaad ka sii diyaarsan doontaa inta badan bilowga ee albaabka ka soo gala. Markaa, layaab kugu noqon mayso inaad cajiinka ku duubto ilaa intaad xafideyso waxyaabaha soo socda.
Tababarku wuxuu ka dhigaa mid kaamil ah:
Sida waxyaabaha oo dhan, waqtiga aad ku celceliso ficil ahaan ayaa go’aamin doonta sida wanaagsan ee aad u fiicantahay. Waqtiga badan ee aad tababarka ku qaadatid, ayaa aad ugu fiicnaan doontaa xirfaddaada. Haddii caqligaasi noqdo ciyaarta craps, markaa waxaad u baahan doontaa inaad ku qaadato waqti kugu filan oo diiradda la saaro si dadku kuugu yeeraan inaad tahay qof xiiseynaya. In kasta oo ay u muuqan karto sidii ay ahayd eray bixin khaldan, haddana way ka fog tahay taas sida ugu macquulsan ee ay wax noqon karaan. Marka lagu daro waqtiga badan ee aad ku tababarto, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso waqtiga aad qaadatay inuu yahay mid tayo ku filan leh. Qof kasta oo lagu qasbay inuu qaato casharo biyaano ayaa kuu sheegi kara sida waqtiga wax ku oolku u yahay marka aadan diirada saari karin maadada. Ilaa aad maskax ahaan joogtid mooyee, uma badna in faa’iidooyin badani soo baxaan iyadoo aan loo eegin inta waqti ee la gelinayo.
Daabac mid ka mid ah jaantusyada iyadoo qaddiyadaha la dul dhigay:
Dabcan, waa suurtagal in la xafido mid kasta oo ka mid ah jaantusyada loo sameeyay kulankaan. Hase yeeshe, iyadoo la tixgelinayo macluumaadka tirada badan, waxay umuuqataa inayba noqonayso hawl aad u xoog badan inteena badan. Haddii aad ka shakisan tahay in xusuustaadu ay leedahay waxa ay u baahan tahay si ay u sameyso waxaas oo kale, markaa waxaan haynaa soo-jeedin laga yaabo in ay kaa tuurto sharaabaadyadaada. Ilaa iyo inta ay suurtagal tahay in la keeno, iskuday inaad daabacdo jaantusyada kahor intaadan aadin khamaarka ama aad ku ciyaarin online casino . Kadib, iyaga oo la jooga intaad miiska agtiisa taagan tahay. U adeegsiga iyaga si loo xisaabiyo sida ugu waxtarka badan loo ciyaaro maahan waxa ugu xun ee dadku ku arkeen gudaha casino. Waxaan kuu balan qaadaynaa intaas inbadan, uguyaraan.
Dhibaatooyinka ka sii wanaagsan oo ay ugu mahadcelinayaan edbinta playstyle:
Kuwa bilowga ah badankood, maahan inay awood u lahayn dejinta istiraatiijiyad wax ku ool ah. Waa markii ay ku dhexjiraan sagxadda khamaarka, wax kasta oo ay barteen markiiba maskaxdooda ayey ka baxaan. Shaki la’aan, tusaale ahaan noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa mid jahwareer badan. Hase yeeshe, waxay umuuqataa in dad aad u tiro badani ay la kulmaan waxaas oo kale si ka duwan sidii laga filan lahaa. Dheeraad ah, markay dadku ku ciyaaraan craps-ka barta internetka, saameyn isku mid ah kuma muuqato hab u muuqda sida muuqata. In kasta oo dadku soo sheegaan wax yar oo ka mid ah jitters, waxay umuuqdaan inay dareemayaan wax badan oo dabacsanaan ah markay ku ciyaaraan internetka guud ahaan.